कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो हर्कत गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए! |
September 1, 2021 adminLeaveaComment on कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो हर्कत गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए!
हाम्रो समाजमा गुरुको स्थान निकै उच्च हुन्छ। कैयौं गुरुहरु यस्ता थिए कि उनीहरुको अहिलेसम्म उदाहरण दिइन्छ।तर, अर्कोतर्फ अहिले केही शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नै भुल्न थालेका छन् ।पछिल्लो समयमा एकजना शिक्षक र स्कुले छात्राको केही फोटो सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । कुनै कक्षामा लिएको प्रस्ट रुपमा देखिने यी फोटोहरुमा शिक्षकको अंगालोमा बेरिएकी एक युवती स्कुले ड्रेसमा नै छिन्।
भानिन्छ प्रेम अन्दो हुन्छ यसले कुनै कुरालाई मतलब गर्दैन तर एक अधबैसे पुरुष र आफ्नै सानी छात्रा जस्तै देखिने यी बालीकाको यो कस्तो प्रेम हो त्यो भने बुझ्न सकिने खालको छैन । पछिल्लो समयमा विभिन्न फेसबुकमा यो तस्विर भाईरल बने पनि यो कहाको र कसको भन्ने तथ्य चाँही सार्वजानीक छैन।
त्यस्तै अर्को अनौठो घटना भारतको आगराका एक शिक्षकको भिडियो केहि महिना अघि सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ। ती शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नाघ्दै शिक्षक शब्दलाई नै कलंकित बनाएका छन्। आगराको एक निजी स्कुलका ती शिक्षकले ७ कक्षाकी छात्रासँग अश्लील हर्कत गर्दै भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिए।
भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले ती शिक्षकलाई पक्राउ गरेर जेल पठाएको छ । आगराको दूरअछनेराको साधन गाउँमा रहेको श्रीमती बादामी देवी पब्लिक स्कुलका शिक्षक जवाहर सिंहले सात कक्षाकी छात्रालाई अफिसमा बोलाएर अ श्लिल हर्कत गर्दै भिडियो बनाएका हुन्। आश्चर्यको कुरा ती छात्राले पनि यो सबै काम खुसीसाथ गरिरहेकी छिन्। घटनाको खुलासा तब भयो जब जवाहरको मोवाइल हरायो।
त्यसलगत्तै लगातार ३ भिडियो भाइरल भए । यी भिडियो गाउँमा सयौं व्यक्तिको मोवाइलमा पुग्यो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि जब छात्राका परिवारले देखे उनीहरुको होस उड्यो। उनीहरुले शिक्षकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराए । प्रहरीले शिक्षकलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ ।त्यस्तै अर्को अनौठो घटना युवतीहरुले कुमारीत्व गुमाएका छन् कि छैनन् भनेर कुमारीत्व नै परिक्षण गरेर छात्रवृति दिइने देश हो दक्षिण अफ्रीका ।
जहाँको उथूकेला शहरकी महिला मेयरले स्कुल र कलेज जाने भर्जिन युवतीहरुलाई छात्रवृति दिने घोषणा गरेपछि यो खबरले विश्वभर सनसनी मच्चाएको छ।
एकाबिहानै भूकम्पको धक्का,यो ठाँउमा देखियो हलचल
सारा जनतालाइ आयो त्रसित गराउने डरलाग्दो खबर। मन थामेर पढ्नुहोला